New Ultrasound Stimulation Iyo Inoshanda Therapy yeAlzheimer's |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » New Ultrasound Stimulation Iyo Inoshanda Therapy yeAlzheimer's
Chirwere cheAlzheimer chinobata vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu pasi rose uye pari zvino hachirapiki. Nzira yekurapa inoshanda inosanganisira kudzikisira kuunganidzwa kweprotein muuropi negamma waves. Nekudaro, zvidzidzo zvinosimbisa maitiro ayo ekurapa uchishandisa isina-yakatarisa ultrasound ine gamma entrainment iri kushomeka. Ikozvino, masayendisiti kubva kuGwangju Institute of Science uye Technology anoratidza kuderedzwa kweprotein kuunganidzwa muuropi nekuwiriranisa masaisai ehuropi kune ekunze ultrasound pulses pa gamma frequency, kuvhura magonhi kune isiri-invasive therapy.
Nekuwedzera kweavhareji yenduramo mumativi akawanda enyika, zvimwe zvirwere zvine chokuita nezera zvazova zvakajairika. Chirwere cheAlzheimer (AD), zvinosuruvarisa kuti ndechimwe chazvo, chiri kuwanda zvikuru munzanga dzevakwegura muJapan, Korea, uye nyika dzakasiyana-siyana dzeEurope. Parizvino hapana mushonga kana nzira inoshanda yekudzikisa kufambira mberi kweAD. Nekuda kweizvozvo, zvinokonzeresa kutambura kwakawanda kuvarwere, mhuri, uye vanochengeta pamwe nemutoro wakakura wehupfumi.
Sezvineiwo, ongororo ichangobva kuitwa nechikwata chemasayendisiti paGwangju Institute of Science and Technology (GIST) muKorea ichangobva kuratidza kuti panogona kunge paine nzira yekurwisa AD nekushandisa "ultrasound-based gamma entrainment," nzira inosanganisira syncing. kumusoro kwehuropi hwemunhu (kana hwemhuka) masaisai ehuropi ari pamusoro pe30 Hz (inonzi "gamma waves") ine kutenderera kwekunze kweiyo frequency yakapihwa. Maitiro acho anongoitika nekuisa pachena chidzidzo kune inodzokororwa kukurudzira, senge ruzha, chiedza, kana mechanical vibrations.
Zvidzidzo zvakapfuura pamakonzo zvakaratidza kuti gamma intrainment inogona kurwisa kuumbwa kwebeta-amyloid plaques uye tau protein accumulations-chiratidzo chekutanga kweAD. Mubepa rino richangoburwa, rakadhindwa muTranslational Neurodegeneration, timu yeGIST yakaratidza kuti zvinokwanisika kuziva gamma kupinda mukati nekushandisa ultrasound pulses pa40 Hz, kureva, mugamma frequency bhendi, muuropi hweAD-modheru yemakonzo.
Imwe yemabhenefiti makuru eiyi nzira iri pamabatirwo ayo anoitwa. Mumwe Purofesa Jae Gwan Kim, akatungamirira ongororo yacho pamwe chete nomubatsiri waPurofesa Tae Kim, anotsanangura kuti: “Ichienzaniswa nedzimwe nzira dzokupinza nadzo gamma dzinotsamira pakurira kana kuti mwenje unopenya, Ultrasound inogona kusvika kuuropi isingapindiki pasina kuvhiringidza gadziriro yedu yokunzwa. Izvi zvinoita kuti nzira dze ultrasound dzive nyore kune varwere. "
Sekuratidzwa kwavo kwakaratidza, mbeva dzakafumurwa kuultrasound pulses kwemaawa maviri zuva nezuva kwemavhiki maviri akange aderedza β-amyloid plaque concentration uye tau protein mazinga muuropi hwavo. Uyezve, kuongorora kwe electroencephalographic kwemakonzo aya kwakaratidzawo kuvandudzwa kwebasa, zvichiratidza kuti kubatana kwehuropi kunobatsirawo kubva mukurapwa uku. Uyezve, nzira yacho haina kukonzera chero rudzi rwe microbleeding (brain hemorrhages), zvichiratidza kuti yakanga isiri mechanically inokuvadza kuuropi tishu.
Pakazere, mibairo inovimbisa yeongororo iyi inogona kuvhura nzira yekuvandudza, isiri-invasive nzira dzekurapa dzeAD pasina mhedzisiro, pamwe nekubatsira kurapa mamwe mamiriro kunze kweAD. Dr. Tae Kim akati: “Kunyange zvazvo nzira yedu ichigona kuvandudza zvikuru kunaka kwoupenyu hwevarwere kupfurikidza nokuderedza kufambira mberi kweAD, inogona kupawo mushonga mutsva kuzvimwe zvirwere zvouropi, zvakadai sehosha yeParkinson.”
Ngativimbei kuti zvidzidzo zveramangwana zvichasimbisa ultrasound-based gamma entrainment senzira yekurapa inoshanda, uye kupa zororo rinodiwa kuvarwere veAD nemhuri dzavo.
Chirwere cheAlzheimer Korea sainzi Technology